Radio sy famokarana fahitalavitra - NYE Countdown ho an'i Djs, Vjs, Nightclubs 2021
Radio sy famokarana ara-barotra amin'ny fahitalavitra
NYECountdowns.com no raharaham-piarahan'ny rahavavy iray amin'ny iray amin'ireo manerantany tena mahomby indrindra, trano famokarana Award mandresy… Ny masoivoho mpamono olona.
Nanampy ny Nightclubs, Resorts, Promoter ary Arenas maneran-tany izahay no vonona hiomana amin'ilay fety lehibe indrindra ananany mandritra ny 20 taona maro. Anjaranao izao! Mila zavatra haingana? Fantsona onjam-peo, toerana fantsom-pahitalavitra, horonan-tsary amin'ny haino aman-jery sosialy… Vita!
Izay fiteny rehetra. Izay halavany rehetra. Na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao!
Tsindrio eto raha hanokana fotoana kely handehanana ny tetikasa ho avy.
Ny dokam-barotra amin'ny radio izay hahatonga ny EPIC Taom-baovao amin'ny Taombaovao! Nahavita famokarana radio mpamono izahay nandritra ny kitapom-pandriana sy toeram-pisakafoanana an-jatony isan-taona. Makà varotra radio mpamono fa tena mahazo varotra anao izao!
Ny fahitalavitra sy tranonkala mahavariana izay handondona ny kiraronao… amin'ny fiteny INDRINDRA! Andao hampiasa ny fahaizantsika Telly Award manokana handresy ny fahaiza-mamokatra famoronana famoronana hampiasana ny ampondra amin'ny varavaranao amin'ny Taom-baovao! Ny fotoana mihodina dia ny andro fandraharahana 5-7… koa HURRY talohan'ny fandehan'ny fotoana!
Ny haino aman-jery sosialy dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampiroboroboana ny Taom-baovao mahaliana. Avelao ianao hanao video an-tranonkala ahafahanao mizara ary mitondra ireo lamosina! Ho tianao izany antoka.